Hotel Projects International - Armati Fundisa njani ukuba Refinish i ebhafini
Armati ndizakufundisa ungeza njani Refinish i ebhafini
NgoLwesihlanu, Meyi 5, 2017 3: 24: 00 AM America / Los_Angeles
ibrashi okanye sisitshizi
ngeplastiki okanye iphepha
emibini epoxy lokufaka
Bawele Works Creative
Susa hardware kunye caulk esidala ebhafini. Coca umgqomo kakuhle nge degreaser.
Xuba yinxalenye-ezimbini epoxy lokufaka de it yakha ntlalu (Images 1 kunye 2). Okulandelayo, isicelo epoxy ngemela putty ukugcwalisa naziphi chips besephezu ebhafini kaThixo (Image 3). Ndolutshayela epoxy ongaphezu kwemfuneko imela putty ukunciphisa ixesha sanding kamva (Image 4).
Bengamabala Smooth Elihle
Xa Liqinisa epoxy, lungisani naziphi na iindawo ezimagqagala kunye eluncedo imela, bok Orbital okanye sandpaper.
Sebenzisa steel okanye sandpaper ukuba ndazikhuhla le ebhafini izihlandlo ezithathu, vacuuming phakathi scrubbings.
Gquma naziphi na iindawo ezifuna ukhuseleko usebenzisa tape, iphepha kunye nokwehla ngelaphu okanye ngeplastiki ..
Ukuze ufumane iziphumo professional, ukutshiza esiphelweni ipeyinti kwi yokuvasa usebenzisa isiguquli. Uyakwazi ukusebenzisa i ibrashi ukwenza lo msebenzi. Linda imizuzu 15-20 ngaphambi kokuba isicelo esinye idyasi.